Size: gburugburu 6cm
Tinggba agba: ọla kọpa ochie
Anyị kwenyere na mmekọrịta okwu ogologo oge na-abụkarị nsonaazụ dị elu, uru agbakwunyere enyemaka, nzute bara ụba na kọntaktị onwe onye maka Ahịa Ahịa China Longzhiyu 13 Years Manufacturer Custom Round Swimming Medal for Academy Graduate Medal with Acrylic Transparent Box, Ndị ahịa anyị a na-ekesakarị North America, Africa na ọwụwa anyanwụ Europe. anyị na-enwe ike na-enye elu-edu ibu na niile mara mma asọmpi uru.
Onu ahia ahia ahia ahia ahia ahia nke China, nke anyi bu “iguzosi ike n’ezi ihe, ihe kacha mma”. Anyị nwere obi ike n’inye gị ezigbo ọrụ na ezigbo azịza. Anyị ji obi anyị nile na anyị nwere ike igosi mmeri-mmeri azụmahịa imekọ ihe ọnụ na ị na-eme n'ọdịnihu!
Nke gara aga: Omenala emere Nkata Nkata
Osote: Omenala Mere Marathon Medal Na-agba Egwuregwu Medallions
Omenala emere Nkata Nkata
Mpekere abụọ jikọtara Design Gold plated Lapel Pi ...